အသည်းအစားထိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး လူနာရှင်များမှ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မးခွန်းများ
What is healthy liver? (ကျန်းမာသောအသည်းဆိုတာ ဘာလဲ)
အသည်းဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ ၂ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၀မ်းဗိုက်၏ ညာဘက် နံရိုးအောက်နားတွင် တည်ရှိသည်။ ကျန်းမာသောအသည်းဖြစ်ပါက regeneration process ခေါ်သော ပျက်စီးသွားသော အသည်းဆဲလ်များနေရာတွင် အသည်းဆဲလ်အသစ်များပန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ သို့သော် အသည်းဆဲလ်များမဲသွားခြင်း (သို့) အသည်းခြောက်ခြင်းဖြစ်ပါက ထို regeneration process ကိုကာင်းစွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပေ။
အူမှစုပ်ယူလိုက်သော ချဖျက်ပြီး အစာများကို processing လုပ်ပေးခြင်း
အစာချေခြင်းအတွက်လိုအပ်သော သည်းခြေရည်များကို ထုတ်ပေးခြင်း
သောက်သုံးလိုက်သောဆေးဝါးများကိုချဖျက်ပေးခြင်းင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ ရာဂါပိုးမွှားများကို တိုက်ထုတ်ပေးခြင်း
သွေးခဲခြင်းနှင့် ပျက်စီးသွားသော တစ်သျူးစများအတွက် လိုအပ်သော အသားဓာတ်နှင့် အင်ဇိုင်းများကို ထုတ်ပေးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
What is cirrhosis or end stage liver disease (ESLD)?
(အသည်းခြောက်ရောဂါ သို့ အသည်းဆဲလ်များဆိုးရွားစွာပျက်စီးနေသောအခြေအနေ)
အသည်းသည် အသည်း ဆဲလ်များသေသွားပြီးနောက် (သို့) အသည်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖတ်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်တွင် ဆဲလ်အသစ်များပန်လည်ပွားများနိုင်သော ခန္ဓာကိုယ်၏ တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုး၊ C ပိုးများကြောင့် နာတာရှည်အသည်းရောင်ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ အရက်ကြောင့် အသည်းပျက်စီးခြင်းစသော အခြေအနေများတွင် ကာလကြာရှည် အသည်းဆဲလ်များ အဆက်မပြတ်ပျက်စီးနိုင်သည်။ ထိုသေသွားသောဆဲလ်များနေရာတွင် Scar tissue များဖြင့် အစားထိုးလာသောအခါမှာ အသည်းတွင် အမာရွတ်များဖြစ်လာသည်။နာက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် အသည်းကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိင်သော (cirrhosis of liver) လို့ခေါ်သော အသည်းခြောက်ခြင်းကို ဖစ်လာစေသည်။
Which diseases can progress to cirrhosis or ESLD? (ဘယ်လိုရောဂါတွေက cirrhosis ကို ဖစ်စေတာလဲ)
Hepatitis C and B (အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုး ၊ ဘီပိုး)
Alcohol related liver disease (အရက်ကြောင့် အသည်းပျက်စီးခြင်း)
Fatty liver disease (related to obesity) (အသည်းအဆီဖုံးခြင်း)
Autoimmune liver diseases (ခုခံအားစနစ်မှ ကိုယ့်ဆဲလ်ကိုယ်ပြန်တိုက်ထုတ်သောရောဂါများ)
Cryptogenic liver disease (အသည်းတွင် အမာရွတ်များဖြစ်လာကာ အသည်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိခိုက်ခြင်း)
Cholestatic liver diseases like primary biliary cirrhosis, secondary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis (အသည်းဆဲလ်များမှ သည်းခြေရည်များထုတ်လုပ်မှု လျာ့ကျလာခြင်း)
Biliary Atresia (absent bile ducts from birth) (မွေးရာပါ သည်းခြေရည်ပြွန်များမပါခြင်း)
Metabolic diseases (defective liver enzymes from birth) (မွေးရာပါ အသည်းအင်ဇိုင်းများချို့တဲ့ခြင်း)
Progessive Familial Intrahepatic Cholestasis(မျိုးရိုးလိုက်သော အသည်းတွင်း သည်းခြေရည်ထွက်နှုန်း ပုံမမှန်ဖြစ်ခြင်း)
Congenital Hepatic Fibrosis (မွေးရာပါ အသည်းဆဲလ်တွင် fibrous tissue များကြောင့် အမာရွတ်ဖြစ်နေခြင်း)
What are the signs and symptoms of liver disease? (အသည်းရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကရော)
အသည်းရောင်အသားဝါဖြစ်ခြင်း (မျက်လုံးနှင့် အရေပြားဝါလာခြင်း)
၀မ်းဗိုက်တွင် ဖာနေခြင်း (ascites)
Encephalopathy : မူးဝေခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အပြုအမူများပြောင်းလဲခြင်း
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းတွင်သွေးယိုခြင်း : သွးအန်ခြင်း၊ ၀မ်းမည်းသွားခြင်း
အခြားအစိတ်အပိုင်းများထိခိုက်ခြင်း : ဆီးသွားနည်းခြင်း၊ အသက်ရှုကြပ်ခြင်း
အသည်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ပင်းထန်သော အခြေအနေသည်မှာ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ရုတ်တရက် လျင်မြန်စွာ အသည်းပျက်စီးပြီးကာင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်းကိုခ်ါသည်။ ယခင်က အသည်းရောင် အသားဝါရှိနေသောလူနာတွင် ထိုအခြေအနေမှာ hepatic coma (encephalopathy) သတိမေ့ခြင်းအထိဖြစ်နိုင်သည်။ အချိန်မီမကုသပါက အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်သည်အထိ ဖစ်နိုင်၍ လိုအပ်ပါက အသည်းအစားထိုးခြင်းကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
What are the causes of Acute Liver Failure? (ဘယ်လိုအကြောင်းရင်းတွေက acute liver failure ကို ဖစ်စေတာလဲ)
Overdose of drugs like paracetamol (ပါရာစီတမောအကိုက်အခဲပျောက်ဆေး အလွန်အကျွံသောက်မိခြင်း)
Viral hepatitis A, E or B (အသည်းရောင်အသားဝါ A, E, B ပိုးများကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း)
Wilson's disease (metabolic disorder) (copper ဓာတ်များ အသည်းတွင် စုပုံလာခြင်း)
Fatty liver during pregnancy (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်း အသည်းအဆီဖုံးခြင်း)
What is Liver Transplantation and who needs it? (အသည်းအစားထိုးခြင်းကို မည်သူတွေက ပိုလိုအပ်သနည်း)
အသည်းအစားထိုးခြင်းဆိုတာ လူနာဆီမှ ပျက်စီးနေသော အသည်းကို ဖယ်ရှားပြီး အလှူရှင်ဆီမှကောင်းမွန်သော အသည်းအစိတ်အပိုင်းဖြင့် စားထိုးကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာက်ပါအခြေအနေတွင် အသည်းအစားထိုးကုသခြင်းကို စဉ်းစားသင့်သည်။
အသည်းပျက်စီးမှုအဆင့်ဆင့်ကို အခြေခံအားဖြင့် အဆင့်(၄)ဆင့်သတ်မှတ် လ့လာနိုင်ပါသည်။
Stage 1: Initial Stage of Liver Disease (အသည်းရောဂါ၏ ပထမအဆင့်)
ပထမအဆင့်တွင် အသည်းနှင့်သည်းခြေပြွန် ရာင်ရမ်းခြင်းကို ဖစ်စေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်မှရောဂါပိုးမွှားများကို တိုက်ထုတ်ရန်ကြိုးစား ချိန်မှာ ထိုသို့ရောင်ရမ်းနေခြင်းကြောင့် ဗိုက်အောင့်ခြင်းကိုခံစားရမည်။ ကာင်းစွာကုသမှုကို မခံယူပါက နာက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် အဆင့် (၂) သို့ ကူးပြောင်းသွားနိုင်သည်။
Stage 2: Fibrosis of the Liver (fibrous tissueများ အစားထိုးခြင်းကြောင့် အသည်းတွင်အမာရွတ်များဖြစ်လာခြင်း)
Fibrosis အခြေအနေတွင် အသည်းသို့သွေးလျှောက်ခြင်း စတင်ပိတ်ဆို့လာပြီး normal tissue (ပုံမှန်ကောင်းမွန်သော တစ်သျူးစများ) အစား အမာရွတ်ဖြစ်စေတတ်သော fibrous tissue များ အစားထိုးဝင်ရောက်လာသည်။ ယခုအဆင့်မှာ အသည်း၏ ပုံမှန်လုပ်ငန်းများ ကာင်းမွန်စွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပါ။ သို့သော် ကုသမှုကို ထိရောက်စွာခံယူပါက နာက်ဆက်တွဲ ရာဂါအခြေအနေများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်သည်။
Stage 3: Cirrhosis of the Liver (အသည်းဆဲလ်များပျက်စီးခြင်း / အသည်းခြောက်ရောဂါ)
Cirrhosis of liver (အသည်းခြောက်ရောဂါ)သည် အသည်းတွင် fibrous tissue များ လုံးဝအစားထိုးလိုက်သောကြောင့် သွးစီးဆင်းမှုများ ပိတ်ဆို့လာပြီး နာတာရှည် အသည်းပျက်စီးခြင်းများ ဖစ်လာသည်။ ထိုသို့အန္တရာယ်များသော အခြေအနေတွင် ဆးကုသမှုကို စနစ်တကျခံယူသင့်သည်။ 
Stage 4: Liver Failure and Advanced Liver Disease (နောက်ဆုံးအဆင့်- အသည်းပျက်စီးခြင်း/ အသည်းအလုပ် မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း)
နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် အသည်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ချေ။ ယခုအခြေအနေတွင် အသက်အန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်ရန် ချက်ချင်းအရေးပေါ်ကုသမှုများခံယူသင့်သည်။ ကုသမှုမခံယူပါက တဖြည်းဖြည်း ပိုဆိုးလာနိုင်ပြီး အသည်းပျက်စီးမှုကြောင့် သဆုံးသည်အထိ ဖစ်နိုင်သည်။ အသည်းပျက်စီးလာသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆိပ်အတောက်များလည်း စုပုံလာစေသည်။
အသည်းရောဂါကြောင့် အသက်ရှင်ရန် သက်တမ်းတစ်နှစ်အောက်သာ ကျန်သောလူနာများအနေဖြင့် အသည်းအစားထိုးကုသခြင်းကို ခံယူသင့်သည်။
အသည်းရောဂါ၏ ပင်းထန်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဆင့် ၁ မှ ၃ အထိသတ်မှတ်ထားပါသည်။ အများအားဖြင့် အဆင့် ၂ င့် အဆင့် ၃ တွင် အသည်းအစားထိုးကုသရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
Who can donatealiver? (ဘယ်သူတွေက အသည်းလှူဒါန်းနိုင်လဲ)
အသည်းလှူဒါန်းနိုင်သူတွေကတော့ living donor (ကျန်းမာ၍အသက်ရှင်လျက်ရှိသူ) ၊ deceased donor (သေဆုံးပြီးကာစ လူ)၊ brain dead donor (ဦးနှောက်ဆဲလ်သေနေတဲ့ အသက်ရှင်လျက်ရှိသူ) အသည်းအစားထိုးကုသခြင်းတွင် (သွေးအမျိုးအစား တူညီမှုရှိမရှိ) blood group matiching test စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်
လူနာသည် "O" သွေးဖြစ်ပါက "O" သွေးအလှူရှင်မှ လှူဒါန်းနိုင်သည်။
လူနာသည် "A" သွေးဖြစ်ပါက "A" (သို့) "O" သွေးအလှူရှင်မှ လှူဒါန်းနိုင်သည်။
လူနာသည် "B" သွေးဖြစ်ပါက "B" (သို့) "O" သွေးအလှူရှင်မှ လှူဒါန်းနိုင်သည်။
လူနာသည် "AB" သွေးဖြစ်ပါက "A" (သို့) "B" (သို့) "AB" (သို့) "O" သွေးအလှူရှင်မှ လှူဒါန်းနိုင်သည်။
living donor ဆိုသည်မှာ ကျန်းမာ၍ အသက်ရှင်လျက်ရှိသောသူကို ဆိုလိုပါသည်။ အသည်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် large portion of liver အသည်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖယ်ရှားလိုက်သော်လည်း အသည်းဆဲလ်များသည် regenerate (ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း)လုပ်နိုင်သော organ (အစိတ်အပိုင်း) တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသည်း၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းမှ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် အသည်းပုံမှန်အရွယ်အစားသို့ပန်ရောက်စေရန် ကြီးထွားလာသည်။ အထက်ပါအချက်ကြောင့် လှူဒါန်းသူမှ အသည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အသည်းတွင် ကင်ဆာ (သို့) အဖုအကျိတ်ဖစ်နေသောလူနာထံသို့ ကာင်းမွန်စွာလှူဒါန်းနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် liver transplant အသည်းအစားထိုးလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အသည်းပျက်စီးနေသောလူနာတွင်လည်း လှူဒါန်းသူ ပးလိုက်သော အသည်းအစိတ်အပိုင်းမှ ထိုလက်ခံလူနာတွင် အသည်းပုံမှန်အရွယ်အစားသို့ပန်လည်ကြီးထွားလာပြီး အသည်း၏လုပ်ငန်း ဆာင်တာများကို မူလအတိုင်းပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
အလှူရှင်ရဲ့ အသည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ထုတ်ယူပြီး လူနာထဲသို့ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလှူရှင်၏အသည်းရဲ့ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အလှူရှင်တွင် ထုတ်ယူပြီးကျန်ရှိသော အသည်း အစိတ်အပိုင်းမှ ပုံမှန်အသည်းအရွယ်အစားသို့ ဆဲလ်များပြန်လည်ပွားများလာသည်။ ၂လမှ ၃လခန့်အတွင်း နဂိုမထုတ်ယူခင်က အသည်းအရွယ်အစားရဲ့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပန်ပြည့်လာနိုင်သည်။
အသည်း အလှူရှင်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ အာက်ပါအချက်အလက်များဖြင့် ပည့်စုံသူဖြစ်ရပါမည်။
 အလှူရှင်အနေနဲ့ မိသားစုဝင်၊ဆွမျိုးသားချင်းဖြစ်ရပါမည်။ ဥပမာ လူနာရှင်ရဲ့မိန်းမ၊ လူနာရှင်ရဲ့ယောက်ျား၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ ၀မ်းကွဲမောင်နှမ၊ ကလေး၊ အဖိုးအဘွား၊ မး
 အသက်၁၈နှစ် င့် ၅၅နှစ် ကြား
For how long does the donor stay in the hospital? (ဆေးရုံမှာ အလှူရှင်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ကြာအောင်နေရမှာလဲ)
အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် ICU (အထူးကြပ်မတ်ဆောင်) တွင် ၂ရက်ခန့်နေပြီးနောက် ရိုးရိုးအခန်းတွင် ၅ရက်မှ ၇ရက်အထိ နရန်လိုအပ်သည်။ ဆးရုံဆင်းပြီးနောက် စိတ်ချရစေရန် ဆးရုံအနီးနားတွင် ၁၀ရက်မှ ၁၅ရက်အထိနေထိုင်ရန် လိုအပ်သည်။
Are there any long term side effects on liver donor? (အသည်းလှူဒါန်းသူအနေနဲ့ ရရှည်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လား)
အသည်းအလှူရှင်သည် ၃ပတ်မှ ၄ပတ်အထိအနားယူရမည်။ ၄ပတ်ကျော်နောက်ပိုင်းတွင် မပင်ပန်းသောအလုပ် (light work)များ လာက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ၆ပတ်မြောက်ရောက်တဲ့အခါတွင် ပုံမှန်အလုပ်များကိုပန်လုပ်နိုင်ပါသည်။ရရှည်တွင် ဆိုးကျိုးများမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ။ ခွဲစိတ်ပြီး ၆လအတွင်း ပင်းထန်သော လ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကို ရှာင်ရှားသင့်သည်။
What do you mean by deceased donors? (Deceased donor ဆိုတာ)
Deceased donor ဆိုသည်မှာသဆုံးပြီးကာစ လူ၊ခါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊ ဦးနှောက်သွေးယိုခြင်း၊ လဖြတ်ခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်သေနေသော လူနာ၊ Deceased Donor Transplant Programme (မသေမီ ကျာက်ကပ်လှူဒါန်းရန် စာရင်းသွင်းလက်ခံသောဌာန) ကို ဆက်သွယ်ထားသူများဖစ်သည်။ ထို program တွင် စာရင်းပေးထားသည် လူမှသဆုံးသွားသောအခါ ဌာန မှ သင့်ကို ဆက်သွယ်လာပါမည်။ ထိုအချိန်တွင်သဆုံးသွားသော လူနာ (non-living donor) ထံမှ အသည်းကို ချက်ချင်းထုတ်ယူပြီး လူနာထံသို့ အလျင်အမြန် အစားထိုးကုသပေးခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
What is the success rate ofaliver transplantation?
အသည်း အစားထိုးကုသမှု၏ 95 ရာခိုင်နှုန်းသည်အာင်မြင်မှုရရှိနိုင်သည်။ အလုံးစုံပန်ကောင်းလာရန် ကြားကာချိန်သည် ရာဂါအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး လူနာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွာခြားပါသည်။
Rejection ဆိုတာဘာလဲ ?
အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှု၏နာက်ဆက်တွဲပြသနာအနေဖြင့် အစားထိုးလိုက်သော အသည်းကို ခန္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအားစနစ်မှပန်လည် တိုက်ထုတ်တတ်သည့်အတွက် risk of rejection ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသည်း အစားထိုးကုသမှုခံယူပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်မှ Anti-rejection medicine (ခုခံအားစနစ်ကိုလျာ့ချပေးသောဆးများ)သာက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Anti-rejection ဆေးများ၏ဘးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့် ယင်းဆေးများသည် ခုခံအားစနစ်ကိုလျာ့ချထားသည့်အတွက် ရာဂါပိုးမွှားများ အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အခြားရောဂါပိုးများ မဝင်ရောက်နိုင်စေရန် အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။
လူနာအနေဖြင့် အစားထိုး ခွဲစိတ်ပြီး ၂လမှ ၃လအတွင်း နလံပြန်ထူးလာနိုင်ပြီး ၆လကြာပြီးနောက် ပုံမှန်လုပ်ငန်း ဆာင်တာတွေကို ပန်လည် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
How can patients follow-up in the future?
(အစားထိုးကုသပြီးနောက် ဆရာဝန်နှင့် ဘယ်အချိန်တွေမှာ ပန်ပြရမလဲ) ပုံမှန်အတိုင်း ၆လတစ်ကြိမ် (သို့) တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နှင့် ပန်လည် ပသရန် လိုအပ်ပါသည်။
     